डाक्टर निगाताको यात्रा मिस नेपालको फाइनलतर्फ, यसरी गरौं भोट – Pahilo Page
डाक्टर निगाताको यात्रा मिस नेपालको फाइनलतर्फ, यसरी गरौं भोट
६ मंसिर २०७७, शनिबार १८:१८ 636 पटक हेरिएको
काठमाडौं । देशभरिका २ सयभन्दा बढी प्रतिष्पर्धीहरुलाई उछिन्दै दाङकी चेली डा. निगाता मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा पुगेकी छन् ।
द हिडन ट्रेजरले आयोजना गरेको मिस नेपाल २०२० मंसिर २० गते फाइनल हुँदैछ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधासहित उपाधिका लागि निगाता कडा मिहेनत गरिरहेकी छिन् ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ रतनपुरका बिष्णुबहादुर केसी र ललिता केसीकी कान्छी छोरी डा. निगाता पढाइ लगायत अन्य क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल छिन् । कला क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्ने निगाताले चिकित्सा विषयमा एमबिबिएस सकाएकी छिन् । बहुप्रतिभाशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्वकी धनी २४ वर्षीया निगाताको उचाइ ५ फिट ५ इन्च छ ।
प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी चलिरहँदा आयोजक हिडन ट्रेजरले मिस पपुलर च्वाइस अवार्डको लागि मतदान खुल्ला गरेको छ । यो अवार्डका लागि निगाताले आफूलाई भोट गर्न सबैलाई अपील गरेकी छन् । आइएमइ पे (क्ष्mभ एबथ बउउ) एप डाउनलोड गरी सोमार्फत प्रतिष्पर्धी नं. ७ की निगातालाई भोट गर्न सकिन्छ । मिस नेपाल २०२० को फाइनलमा २१ जना प्रतिष्पर्धीहरु छन् ।
लिटिल मिस एण्ड मिस्टर दाङको एम्बेस्डरमा नायक आयान
लिटिल मिस एण्ड मिस्टरको उपनिर्देशक शर्मा, प्रशिक्षक न्यौपाने र प्रेस संयोजक डाँगी
”लिटिल मिस दाङ”को आवेदन खुला
ज्यानमारा मुस्कानको पोष्टर आयो, भिडियो आउँदै